SERIE A: Kooxda Juventus oo guul ka gaartay Torino, dheereysatayna hoggaanka horyaalka iyo kulamadii kale ee la ciyaaray – Gool FM
(Torino) 11 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Serie A, kaddib guul ay ka gaartay Torino, waxaana ay uga badisay 3-1.
Kooxda Torino ayaa goolka la horreysay, waxaana naadiga martida ahayd ee Juventus madax ugu shubay 16’daqiiqo Andrea Belotti, kaddib karoos uu soo qaaday Daniele Baselli 1-0 ayaana Juve lagu hoggaamiyey.
Juventus ayaa goolkaas iska soo guday inta aan la aadin qeybta nasashada waxaana goolka barbaraha u dhaliyey Juve 28’daqiiqo weeraryahankeeda Gonzalo Higuain, kaddib caawin uu ka helay Mario Mandzukic, sidaas ayaana lagu kala nastay kulanka oo ah barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta marikii dib la isugu soo laabtay ayaa dhammaadkii ciyaarta ay Juventus la timid labo gool oo deg deg ah, waxaana u kala dhaliyey 82’daqiiqo Gonzalo Higuain iyo 90’daqiiqo Miralem Pjanic, sidaas ayeyna Juventus guul ku gaartay 3-1.
Juventus ayaana hoggaanka horyaalka Serie A sii dheereysatay, waxaana ay haatan ku haysaa 39-dhibcood.
Kulamadii kale ee la ciyaaray hroyaalka Serie A maanta:-
Cagliari 0 – 5 SSC Napoli
Palermo 0 – 2 ChievoVerona